Toe-draharaham-pirenena : minia mikimpy ny mpitondra (NewsMada) | AEMW
Toe-draharaham-pirenena : minia mikimpy ny mpitondra (NewsMada)
« Olona vitsy isaina amin’ny rantsan-tanana no eo, manentana ny olona miaraka aminy eo, vidim-bola sy ny tahaka izany… Lazaina fa ny Malagasy iray manontolo no miaraka amin-dry zareo. » Io ny fanehoan-kevitry ny filoha Rajaonarimampianina tany Nairobi, Kenya, afakomaly, manoloana ny hetsika Mitsangàna ry Malagasy.
« Aza fitahina amin’izany ny Malagasy », hoy izy. Hendry ny vahoaka. Maro ny efa nahita ny mangidy, ka tsy te hiverina intsony amin’izany fangirifiriana izany. Tsy hoe mihatsara ny eny ambony lovian’ny rehetra, fa efa be ny ezaka. Ny zava-manahirana eto : rehefa mandeha ny ezaka, mifandroritra midina amin’ny zava-drehetra isika.
« Tsy mora ny hoe mialà, fa izy no tokony handini-tena », hoy ihany izy. Efa nirotsa-kofidina ireo, refeso ny azony tamin’izany fotoana izany. Nirotsaka ho ben’ny Tanàna, depiote, loholona, filoham-pirenena. Andao mba hampitahaina ny vato azony tamin’izany fotoana izany: iza no tokony hiala?
Vita ny adihevitra momba ny lalàn’ny fifandraisana
« Efa vita ny adihevitra. Havoaka ilay lalàna, fa misy sehatra hahazoantsika mifampiresaka hanatsarana azy », hoy izy momba ny lalàn’ny fifandraisana. Tsy mifarana amina andro na lalàna iray ny fiainam-pirenena. Samy mbola eto isika rehetra, tomponandraikitra amin’ny fampandrosoana. Maninona no tsy manokatra sehatra iray hahazoana mifampiresaka hahazoana manatsara izany? Raha ny fahitany azy, be ny manohana izany.
Mamita-bahoaka ny mpitondra
Tsy ny mpitondra ve no mamita-tena sy mamita-bahoaka? Tsy misy tsy mikaikaika amin’ny ataony ny vahoaka… Tsy misy ny fitsapana ny fironan’ny hevi-bahoaka. Nefa mazava ny afitsoky ny mpitondra amin’ny famoriam-bahoaka: manarama olona raha izy no manao azy, aparitaka amin’ny herim-pamoretana raha tsy avy aminy…
Tsy afa-miova amin’ny heviny tamin’ny fifidianana ve ny vahoaka, raha mivadi-belirano ny mpitondra? Nefa teo ny fandrahonana ary ny hosoka sy hala-bato tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy fifidianana loholona, raha vato no ampitahaina…
Raha tohanam-bahoaka ny mpitondra: matahotra fifampidinihana, fifidianana mialoha ny fotoana, na fidinana an-dalambe aza?
← Porofoy amin’ny asa ny vava (NewsMada)
Fermeture de l'exploitation aurifère de Vohilava Mananjary (Tribune) →